Ubunzima bomntu: ukuqokelela i-Les Copains FW 2016-2017
Iqoqo lekwindla-ebusika i-Les Copains ibali lokuphakama okungenakukhathazeka, into encinci, kodwa, ngokungathandabuzekiyo, eyayimvelaphi kunye neyokuthakazelisa. I-aesthetics encinci yee-30, inxalenye yamabhinqa angama-60 kunye neentando zentando yesininzi zamaxesha atshanje anamafestile - kumxube okhangayo we-brand yaseNtaliyane.
I-European sophistication: i-photo promotion ye-Les Copains FW 2016-2017
Phakathi kwinqanaba lezinto ezilungileyo zentsimbi yangaphandle: isiseko somgca iqukethe iingubo ezincinci zokubamba iingubo, ubomvu obunzima kunye ne-leather manto, ubude obukhulu beebhatyi kunye neebhatyi ezingaphantsi. Zihlanganiswe ngokugqibeleleyo kunye neengqungquthela ezinjengeempahla kunye nezigulane, iingubo ezincinci kunye neepantshi ezincinci-ipensele. Ingqwalasela ekhethekileyo ihlawulwa kwiinkcukacha zabaqulunqi: iingubo zingenakongezwa ngeemfestile ezithambileyo kunye neengqungquthela, iintambo zentsimbi, iimbopho, iikholeji ezikhutshwayo kunye nezicelo ezivela kumatye kunye nemigqa.
Iboya kunye neengubo ze-cashmere zibalaseleyo kwiqoqo le-Les Copains
Imifanekiso engaqhelekanga yexesha elibandayo kwi-line entsha ye-Les Copains
I-Les Copains ayamkeli ukunyaniseka xa kufikelele kumgangatho. Ukuqokelela kwenziwe ngezinto eziphathekayo: i-suede, uboya, i-cashmere kunye nekotoni. I-palette yombala ngokuqhelekileyo isitshixo esiphantsi: i-monochrome silhouettes ivuselela iwayini enobisi, i-coral ne-turquoise accents. Iqoqo le-Les Copains FW 2016-2017 lifumaneka ukuze lilandelwe kwiwebhusayithi esemthethweni ye-brand.
Inkqubo yokupapasha i-Les Copains FW 2016-2017
Ukuthenga nge-Intanethi ngeBIZZARRO
Imfashini yinxalenye ebalulekileyo yobomi bethu okanye indlela yokufumana imali.
Isaladi kunye ne-squid neqanda
UKatya Lel wabonisa uAlexandro Domogarov oselekhulile: abalandeli banenkxalabo ngempilo yomculi
Yingozi kumnandi kwimpilo yabantu
Indlela yokugcina ii-bulbs ze-gladioli
Ikhukhi zecoleta kunye nesinamoni kunye nekhofi
Yintoni oyifunayo ukuba ube ngumzekelo?
Ukubonakala kakuhle komfazi kumadoda